အပြာစာပေသုံးစွဲခြင်းနှင့်စွဲခြင်း - အမျိုးသား ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၈-၃၀“ စွဲလမ်း” သို့မဟုတ်“ မသေချာ” (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စွဲလမ်း - (33) ယောက်ျား 18-30 ၏ 2014% "စွဲ" သို့မဟုတ် "မသေချာ"
ရလဒ်များတစ်ဦးထံမှများမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးလေ့လာမှု။ ပထမဦးစွာသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူတို့၏ကြိမ်နှုန်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့သိပ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးထင်လျှင်ဒုတိယ, သူတို့မေးမွနျးခဲ့သညျ။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အညစ်ညမ်းစွဲခဲ့ခံစားခဲ့ရလျှင်တတိယ, သူတို့ကမေးမွနျးခဲ့သညျ။ 33 နှင့် 18 များ၏အသက်အရွယ်ဖြစ်စေအကြားယောက်ျား၏သုံးပုံတစ်ပုံ (30%) သူတို့စွဲနေကြတယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်လူအခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံနှစ်ပုံ (64%) ကအနည်းဆုံးလစဉ်ညစ်ညမ်းရှုမြင်
တကျိပ်ရှစ်လစဉ် 79 နှင့် 18 အမြင်ညစ်ညမ်း၏အသက်အရွယ်အကြား (30%) ယောက်ျား
လစဉ် 67 နှင့် 31 အမြင်ညစ်ညမ်း၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျား၏သုံးပုံနှစ်ပုံ (49%)
လစဉ် 49 နှင့် 50 အမြင်ညစ်ညမ်း၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျား၏ one-တစ်ဝက် (68%)
33 နှင့် 18 များ၏အသက်အရွယ်ဖြစ်စေအကြားယောက်ျား၏သုံးပုံတစ်ပုံ (30%) သူတို့စွဲနေကြတယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာများမှာ
ပေါင်းလိုက်သောလူအပေါင်းတို့၏ 18% ကိုသူတို့စွဲနေကြတယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ 21 သန်းလူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ထားသည်ပေးသောညစ်ညမ်း, စွဲလျှင်မသေချာများမှာဖြစ်စေ
3 ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှစွဲလမ်း
မေးခွန်း: တစ်ဦး၏သင့်နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး "စွဲ" သငျသညျအစဉျအမွဲသငျသညျညစ်ညမ်းတစ်ခုစွဲစေခြင်းငှါထင်ကြသနည်း
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အညစ်ညမ်းစွဲစေခြင်းငှါထင်လျှင်မေးသောအခါလူအပေါင်းတို့ 13% ဟုတ်ကဲ့ဖြေကြားခြင်းနှင့်အခြား 5% ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစွဲခဲ့ကြသည်လျှင်သေချာမသိခဲ့ကြဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်နီးပါးနှစ်ခုတစ်ဆယ်အတွက် (18%) ယောက်ျားသူတို့စွဲနေကြတယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာများမှာလည်းကောင်း။ ဤသည် 21 သန်းလူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
တကျိပ်နှစ်ခု (21%) အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေး Self-များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခရစ်ယာန်ယောက်ျားသူတို့စွဲဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ဆယ်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောလူတဦးတည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာဖြစ်ကြ၏ထင်ဖြစ်စေ။
အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပြိုပျက်, 18 နှင့် 30 နှစ်အကြားယောက်ျား၏သုံးပုံတစ်ပုံဟောင်းသူတို့စွဲနေကြတယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာများမှာလည်းကောင်း။ ချွန်ထက်ဆနျ့ကငျြဘအသုံးပြုပုံ5နှင့် 50 အကြားယောက်ျားကသာ 68% သူတို့ဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး status ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောယောက်ျား၏ 19% နှင့်လက်ထပ်ယောက်ျား၏ 17% ကိုသူတို့စွဲနေကြတယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာများမှာလည်းကောင်း။
 US မှာ 119 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျရှိပါတယ် (အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ကြည့်ပါ http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html)
စားပွဲတင် 3.1 သင်ကအမျိုးသားများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ
Yes 23% 16% 4% 0%
မသေချာပါ 10% 6% 1% 3%
စားပွဲတင် 3.2 သင်ဟာကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ခရစ်ယာန်အမျိုးသားများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ
Yes 15% 6%
မသေချာပါ 6% 4%
စားပွဲတင် 3.3 သင်ဟာယောက်ျား၏အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ
Yes 14% 12%
မသေချာပါ 3% 7%
စားပွဲတင် 3.4 သငျသညျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ အမျိုးသားများအတွက်၏အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေခွန်အားဖြင့်
$ 50k ထက်လျော့နည်း
$ 75k ကျော်
Yes 13% 10% 15%
မသေချာပါ 6% 5% 3%
စားပွဲတင် 3.5 သငျသညျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ အမျိုးသားများအတွက်၏ပညာရေးအားဖြင့်
Yes 13% 10% 14%
မသေချာပါ 7% 3% 4%
စားပွဲတင် 3.6 သငျသညျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ လူအ Ethnicity အားဖြင့်
Yes 11% 12% 22%
မသေချာပါ 4% 17% 2%
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အညစ်ညမ်းစွဲစေခြင်းငှါထင်လျှင်မေးတဲ့အခါ, ရှိသမျှအမျိုးသမီးတွေ 3% သူတို့ဖြစ်စေသူတို့ညစ်ညမ်းစွဲနေလျှင်သူတို့စွဲသို့မဟုတ်မသေချာများမှာမည်အကြောင်းတည်းထင်ကြောင်းဖြေသည်။ ဤသည်3သန်းမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေး Self-များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများကသာ 2% သူတို့ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောအမျိုးသမီးများ 4% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ညစ်ညမ်းစွဲနေလျှင်သူတို့စွဲသို့မဟုတ်မသေချာဖြစ်ကြ၏ထင်ဖြစ်စေ။
အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပြိုပျက်,7နှင့် 18 နှစ်အကြားအမျိုးသမီးများ 30% ဟောင်းသူတို့စွဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟောင်း4နှင့် 31 နှစ်အကြားအမျိုးသမီးများ 49% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာဖြစ်ကြ၏ထင်ဖြစ်စေ။
လူမျိုးစုဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသမီးများ၏ 8% ကိုသူတို့စွဲဒါမှမဟုတ်သူတို့က Black အမျိုးသမီး 5% နှင့်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးများ၏ 1% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ညစ်ညမ်းစွဲလျှင်မသေချာဖြစ်ကြ၏ထင်ဖြစ်စေ, ကိုလည်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
 US မှာ 119 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်အမေရိကန်အတွက် 123 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ် (အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ကြည့်ပါ http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html)
စားပွဲတင် 3.7 ကိုသင်အမျိုးသမီးများနေ့အားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ
Yes 6% 3% 0%
မသေချာပါ 1% 1% 0%
စားပွဲတင် 3.8 သင်ဟာကိုယ်ပိုင် identifier ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ
Yes 2% 3%
မသေချာပါ 0% 1%
စားပွဲတင် 3.9 သင်ဟာအမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ
Yes 3% 2%
စားပွဲတင် 3.10 သငျသညျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ အမြိုးသမီးမြား၏အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေခွန်အားဖြင့်
Yes 1% 5% 5%
မသေချာပါ 0% 1% 1%
စားပွဲတင် 3.11 သငျသညျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ အမြိုးသမီးမြား၏ပညာရေးအားဖြင့်
Yes 2% 2% 4%
စားပွဲတင် 3.12 သငျသညျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲလိမ့်မယ်စဉ်းစားပါ အမျိုးသမီး Ethnicity အားဖြင့်
Yes 1% 5% 6%
မသေချာပါ 0% 0% 2%
မူပိုင်ခွင့်© 2014 All rights reserved အမျိုးသားများအတွက်ဝန်ကြီးဌာနများ, Ltd သက်သေပြ။ မျိုးပွားခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးသားခဲ့သော၏ express ကိုခွင့်ပြုချက်နဲ့အသိအမှတ်ပြုနှစ်ဦးစလုံးမရှိဘဲတားမြစ်သည်။ သင် ... နိုင်ပါသည် မဟုတ် (ကျွန်ုပ်တို့၏ express ကိုရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲ) မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မည်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်များ, တွေ့ရှိချက်, စာရင်းဇယားသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။
တရားမျှတသောအသုံးပြုခြင်း။ အဆိုပါမီဒီယာနှင့်စီးပွားရေးမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကဤစစ်တမ်းဤထုတ်ပြန်ချက်များ, တွေ့ရှိချက်, စာရင်းဇယားသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မှကိုးကားစခွေငျးငှါသငျသညျကိုအောက်ပါကိုးကား အသုံးပြု. အကြွေးပေးထောက်ပံ့:
2014 (Barna Group ကကောက်ယူ) ProvenMen.org ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲစစ်တမ်း။ အဆိုပါစစ်တမ်းရလဒ်များမှာတည်ရှိသည် www.provenmen.org/2014pornsurvey/pornography-use-and-addiction.
 အမေရိကန် (အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ကြည့်ပါအတွက် 119 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျရှိပါတယ် http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html)
 အမေရိကန် 119 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့် 123 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ကြည့်ပါ (US မှာရှိပါတယ် http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html)